जीवन एक प्रतियोगिता
राजनीतिदेखि छुट्टै, जीवनको खास कुराको बारेमा, बिद्यार्थी अनि युवाबर्गलाई आह्वान गर्छु कि, जीवनको बाजी जित्नुको निम्ति हामीहरू प्रतियोगी बन्नुपर्छ। पूर्ण तैयारी गर्नु र हुनुपर्छ। यहि पूर्ण तैयारी शुरूवातको सुसाइत हो, तब प्रतियोगितामा भाग लिन पर्छ। ब्यवसाय अनि जीविकोपार्जनको पेसा दुवै प्रतियोगिता हुन्‌। सफलताको निम्ति खाँट्टी परिकल्पना, ध्यान, धैर्य, परिश्रम, टाठोपन, होशियारी, सरलता, नम्रता र इमान चाहिन्छ। सफलताको स्वाद जति मिठो हुन्छ, असफलताको अनुभव उति नै तितो हुन्छ। असफलता जीवनको अन्त होइन, न यो सफलताको स्तम्भ हो। सफलताको निम्ति असफलताको तितोपन चाख्नैपर्छ भन्ने नियम छैन। इतिहासबाट पाठ सिक्नु पर्छ अवश्यै अनि नराम्रो इतिहास दोहोऱ्याउनु हुन्न। असफल नहौं।
म भन्छु कि, चेतनशील हामीहरूले हाम्रो तिब्र मष्तिष्कलाई भोद्याउने, लर्बऱ्याउने र शरीर लड़ाई बाटोको लास बनाउने सराब पिउने खराब लतदेखि टाड़ो रहनु बुद्धिमानी हो। यो मेरो जीवनको निजी अनुशासन हो। कर्मचारीहरूलाई आफूले दाम दिएर लगाएको कामको समय भरी, मादक पदार्थ पिउँनु निषेध गर्नु बेस्‌। जबरजस्ती चाहिँ नगरौं; जो यसो गर्नु सक्दैनन्‌/मान्दैनन्‌, उनिहरुले अन्य काम खोजुन्‌। बस्‌, भैगयो त। कुलतले ब्यक्ति साथै ब्यवसाय दुवैलाई हानि पुऱ्याउँछ। चेतनशील छौं; अचेत नबनौं।
कोरोना महामारीले उग्ररुप धारण गरी फेरि देश भरी भारीरूपमा फैलँदोछ। सामाजिक दुरत्वहिन सम्पर्क र सलङ्गमलङ्गको कारण संक्रमितको संख्याले धुरी काटिसकेकोछ अनि अनेकौंको ज्यान गुमीसकेकोछ। यहाँ, पहाड़ र समतलमा पनि संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेकोछ र यस्को प्रकोपले मर्नेको संख्या बड़्‌दोछ। कस्तो-कस्तो सँग त जुझियो; एस्तो नाथे कोरोना सोरोनालाई पचाइदिन्छु भनी हॅुकार गर्नेहरू पनि अब घबराएको देखियो। डराउनै पर्छ अनि एसबाट जोगिनैपर्छ। महामारीबाट जोगिने नियम पालन गरे, अत्तेसिने कारण छैन। केहि नभई पनि, अत्तेसले अलसतलस पार्नु सक्छ। मनले त के सोच्दैन र! आफै सम्हालिनु पर्छ। एकाग्र चित्तले प्रभु परमात्माको ध्यान सुमिरन गरे राहत मिल्नुसक्छ्‌। केहि फरक नपरे, ‘डक्टर’-को सल्लाह लिनु असल हो।
घरदेखि बाहिर जानै परेको खण्डमा, पालन गर्नुपर्ने नियमहरू छन्‌ :- 1) नाक र मुख छोप्ने ‘मास्क’ लगाउँ; 2) बाहिर छँदा अन्यदेखि कम्तीको पनि छ फीटको दुरीमा रहौं; 3) सलङ्गमलङ्ग पटक्कै नगरौं; 4) घरि घरि साबुन र पानीले हात धुऔं; 5) बाहिर जाँदा लगाएको बस्त्रहरू घर फर्कने साथ धुइहाल्नु असल; 6) शारीरिक तन्दुरुस्तीको निम्ति दैनिक मामुली कसरत गरौं ; 7) बुनियादी स्वास्थ्य शिक्षा पालन गरौं; 8) महामारीबाट बाँच्ने खोप लगाउँ इत्यादि, इत्यादि। यी नियमहरू पालन गरे महामारीबाट जोगिइन्छ/बाँचिन्छ। यो महामारी खोजी-खोजी लाग्नु आउँदैन तर यस्को छ-फिटे परिधिभित्र पसे, यस्ले छोड़्‌नेछैन। होशियार!
अदृष्य कोरोना भाइरस अर्को कुनै मानवको शरीरमा बस्छ। त्यसकारण, सँगैै बस्ने परिवारका सदस्यहरू बाहेक अन्य सँग तोकिएको सामाजिक दूरी कायम राख्न अनिवार्य छ। बाहिर जाँदा मास्क पनि खापेर लगाउने सिफारिस छ। जोगियौं। सुरक्षित रहौं।
महामारीको महागाथा विभिन्न सालको विभिन्न महामारीको ऐतिहासिक जानकारी
मुख्यमन्त्री गोलेको गरीबवादी विचारधारा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्च
दाण्डी मार्च अनि गोलेको राष्ट्रप्रेम
ओझेलमा बाँचेका गायक/संगीतकार श्रीमान राम विष्ट
भयावह रूपमा कोरोनाको दोस्रो लहर
चम्पासरी नेपाली साहित्य परिषद
01दाण्डी मार्च अनि गोलेको राष्ट्रप्रेम
02ओझेलमा बाँचेका गायक/संगीतकार श्रीमान राम विष्ट
04भयावह रूपमा कोरोनाको दोस्रो लहर
17 09:23:16 Jan 2022